MOBILE GOVERNMENT Thet AungIT Director Photo credit : futuregov.asia 2.
Government• political organization comprising the individuals and institutions authorized to formulate public policies and• conduct affairs of state Microsoft ® Encarta ® 2009. 3.
Mobile• moving easily: able to move freely or easily Microsoft ® Encarta ® 2009. 4.
eGoverment• သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 5.
သ သ သ သ• Mobile (သ သ သ သ သ သ Mobile သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• Mobile Phone, Laptop, Computer, PDA,Tablet Computer TWO-Way Pager သ သ သGPS သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သMobile သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 6.
Mobile VS Wireless• Mobile internet fully mobile• Wireless partial mobile 7.
mBusiness and mCommerce 8.
From eGov to mGovmPowering the Nations Ibrahim Kushchu 9.
သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• m-Government သ သe-Government သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 10.
သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 11.
တ တ တ တ တ တ တ တ တတ တ တ 12.
Few of them• Mobile penetration – Government project• Evolution of mobile internet technologies,• standards and protocols allowing faster and more sophisticated• Increasing trends in the adoption of mobileinternet applications and services• သ သ သ သ သ သ သ သ 13.
သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• m-Comms (m သ သ သ သ သ ) သ သ သ သ သ• m-Services (m သ သ သ သ သ ) သ သ သ သ သ• m-Democracy (m သ သ သ သ သ ) သ သ သ သ သ• m-Admin (m သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ ) 14.
mသ သ သ သ သ သ သ သသသ 15.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• G2C သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• C2G သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 16.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ SMS သ သ-• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 17.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 18.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 19.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• eBanking သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ Mobileသ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ Mobile သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 20.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 21.
eDemocracy plus mobile• Promoting increased participation• Quality of transparency• And better democracy 22.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ Mobile သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• Mobile သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ Mobile သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 23.
mသ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ 24.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ G2E သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• Mobile သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 25.
mသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သMobile သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 26.
သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ Web-based Public Data Integration Enhanced e-Gov 27.
တ တ တ တ တ တ တ တ တ တ တ တ တm-Government သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 28.
သ သ သ + သ သ သ• m-Government • သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ • သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ Mobile သ သ သ သ သ • သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ • သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ Spam) သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 29.
သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သသ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ• သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ သ 30.
References• www.egov4dev.org• www.mgovernment.org• www.futuregov.asia• Keywords : mgovernment mobile government Recommended